Axmed Madoobe oo u tagay Rooble +SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News Axmed Madoobe oo u tagay Rooble +SAWIRRO
Axmed Madoobe oo u tagay Rooble +SAWIRRO
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta sanad kadib, gudaha u galay xarunta Villa Soomaaliya, isaga oo kulan gaar ah la yeeshay Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Maxamed Ibraahim Macallimuu oo qoraal kooban ka soo saaray booqashada Axmed Madoobe ee Madaxtooyada ayaa yiri “Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa maanta soo gaaray Madaxtooyada Soomaaliya oo ay ugu dambeysay dhamaadka September 2020 markii hishiiskiisa 17 September la gudagaliyay dhaqan galkiisa. Waxaa xafiiskiisa ku qaabilay RW Rooble,”
Sidoo kale labada dhinac ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay xafiiska ra’iisul wasaaraha, iyaga oo ka arrinsaday xaaladda dalka iyo doorashadii soo dhammaatay.
“Waxa ay ka wada hadleen gebagebada howshii doorashada dalka ee guushah ku soo dhammaaday,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha.
Soomaaliya ayaa haatan ka gudubtay xaaladdii adkeyd iyo is mariwaaga taagnaa, kadib isbedalka ku yimid hoggaanka Villa Somalia oo mar labaad loo doortay Xasan Sheekh.
Previous articleDAAWO:-Liverpool Oo Guul Kala Soo Laabatay Southampton +SAWIRRO
Next articleDAAWO:-Xildhibaanadii garbahaarey lagu soo doortay oo muqdisho lagu xanibay
“Shacabkii iyo ganacsatadii Muqdisho maanta askarta ilaalisaa waa dhagax”
Dilkii Sheekh Maxamed Xassan oo boolisku warbixin ka keeneen